IGBT Snubber mpanamboatra sy mpamatsy - China IGBT Snubber Factory
Fitehirizana angovo / Capacitor pulse
Kapasitor fanafanana induction
Sivana angovo mavitrika
Capacitors famatsiana herinaratra
Kapasera fanamafisana induction
Inverter herinaratra momba ny harena ankibon'ny tany
AC capacitor sivana (AKMJ-PS)
Capacitor mahery vaika ho an'ny herinaratra elektrika
Kapasera vita amin'ny herinaratra namboarina ampiasaina amin'ny boriborintany DC
Capacitors DC voltase avo lenta ho an'ny fiovam-po
UL Capacitor sarimihetsika voamarina ho an'ny sivana DC (DMJ-MC)
Kapitalista sarimihetsika vita amin'ny metaly ho an'ny appliance power supply ...
Famolavolana capacitor IGBT Snubber kilasy avo lenta ho an'ny ...
Snubber avo lenta miaraka amin'ny fahafaha-manaon'ny pulsa
Famolavolana capacitor horonantsary snubber avo indrindra ho an'ny ...
ROHS sy REACH mpifanaraka Axial snubber capacitor SMJ-TE
CRE isan-karazany ny capacitor snubber IGBT dia mifanaraka amin'ny ROHS ary REACH.
1. Toetra mampiavaka ny lelafo
2. Fefy plastika na fametahana kasety mylra
3. feno ny expoxy end
5. Custom namboarina misy
GTO snubber capacitor amin'ny herinaratra fitaovana elektronika
Ny boriborintany snubber dia tena ilaina amin'ny diode ampiasaina amin'ny fifindrana faribolana. Izy io dia afaka mamonjy diode amin'ny spikes mahery vaika, izay mety hitranga mandritra ny dingan'ny famerenana amin'ny laoniny.
Famolavolana capacitor horonantsary snubber avo indrindra ho an'ny fampiharana elektronika herinaratra IGBT
1. Trangam-plastika, nasiana tombo-kase amin'ny resina;
2. Fampidirana varahina nopetahina firavaka, fametrahana mora ho an'ny IGBT;
3. Fanoherana ny herinaratra avo, ambany tgδ, fiakaran'ny maripana ambany;
5. High pulse amin'izao fotoana izao.
Ny capacitor horonantsary CRE snubber dia natao ho an'ny asa avo lenta farany ilaina amin'ny fiarovana amin'ny herinaratra mandalo.
1. mahazaka ny fahaizany ambony dv / dt
Famolavolana capacitor IGBT Snubber kilasy avo lenta ho an'ny fampiharana matanjaka
5. High pulse amin'izao fotoana izao;
6. UL voamarina.
Polypropylene Snubber Capacitors ampiasaina amin'ny rindrambaiko avo lenta, avo lenta ary avo lenta
Snubber Capacitors dia capacitor haingam-pandeha haingam-pandeha avo lenta miaraka amin'ny terminal axial. Azo alaina ao amin'ny CRE ny capacitor horonantsary Axial. Manolotra firaketana, vidiny ary datasheet izahay ho an'ny Axial Film Capacitors.
2. Lisitra be dia be;
Ambongadiny High capacitor Snubber Capacitor
CRE dia manome karazana capacitor snubber isan-karazany.
1. capacitors snubber vaovao novolavolaina sy novokarin'ny CRE
2. Ny mpitarika ny famolavolana sy ny famokarana capacitor amin'ny sarimihetsika.
3. Raha mila famaritana snubber tsy manam-paharoa ianao dia mankanesa any amin'ny foibenay ho an'ny mpamorona snubber.
Sarimihetsika vita amin'ny metaly IGBT Snubber capacitor
Snubber mpamaky sarimihetsika amin'izao fotoana izao ho an'ny milina welding (SMJ-TC)
Modely momba ny Capacitor: SMJ-TC
1. Elektroda voanjo varahina
2. habe ara-batana kely ary fametrahana mora
3. Teknolojia miolakolaka amin'ny kasety Mylar
4. Famenoana résin maina
5. Fampitarana andian-tsarimihetsika ambany (ESL) ary fanoherana andian-dahatsoratra mitovy (ESR)
2. Fiakaran'ny herinaratra tampon'ny tendro sy ny tampon'ny ankehitriny ary ny fiarovana azy amin'ny fitaovana elektronika
Kapila capacitor snubber GTO
Ireo capacitors ireo dia mety mahazaka ny pulses mavesatra ankehitriny izay matetika mihaona amin'ny fiarovana GTO. Ny fifandraisana axial dia mamela ny fihenan'ny inductance andian-dahatsoratra ary manome fifandraisana ara-mekanika matanjaka miorina amin'ny herinaratra azo antoka ary fanaparitahana hafanana tsara vokarin'ny asa fanompoana.
Diélectric ambany fampiasa amin'ny polypropylene film Snubber capacitor ho an'ny fampiharana IGBT
1. Ny toetra mampiavaka ny lelafo dia azo antoka amin'ny alàlan'ny fametahana plastika sy famenoana epoxy farany izay mifanaraka amin'ny UL94-VO.
2. Ny fomban'ny terminal sy ny haben'ny tranga dia azo namboarina.
Asa isan'andro ao amin'ny CRE
Ampio ny hoavinao
Telefaona: 0086 18362396881
Adiresy: Building D, No.789 NanHu Avenue, Distrikan'i Liangxi, tanànan'i Wuxi, faritanin'i Jiangsu, Sina 214000